Vols kuBourgas, Zakynthos, Brussels, Chania, Larnaca, Paris nePorto paWizz Air kutangazve kubva kuBudapest
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Vols kuBourgas, Zakynthos, Brussels, Chania, Larnaca, Paris nePorto paWizz Air kutangazve kubva kuBudapest
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Belgium Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bulgaria Kuputsa Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Greece Kupwanya Nhau • Hungary Kuputsa Nhau • nhau • Portugal Kuvhuna Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Pasina kukwikwidza, Wizz Air yakatangazve kubatana kwaBudapest neZakynthos nemusi weSvondo, ichijoinha mamwe mavhiki ekutanga mabasa kuBrussels Charleroi, Chania, Larnaca, Paris Orly, nePorto.
Kumwe kutangazve kuzivikanwa yaive yekuHungary gedhi rekutanga kubatanidzwazve neBulgaria.
Wizz Air yakavhurwa kaviri-vhiki kubatanidza kuBourgas, guta rechipiri rakakura reBulgaria pamhenderekedzo yeGungwa Dema.
Wizz Mhepo inokwanisa kukwidziridza nhamba dzendege sezvo zvirambidzo pakufamba kuenda nekudzoka kuBudapest zviri kurerutswa.
Wizz Mhepo yakatangazve mamwe masevhisi manomwe kubva Budapest Airport vhiki rapera, kuwedzera zvakare nhandare yendege yeEuropean network uye kupa vatengi dzimwe sarudzo dzekufamba zvakare. Kumwe kutangazve kwakatanhamara kwaive kwekutanga kuunganidzwa kwegedhi reHungary neBulgaria, sezvo mutakuri wemutengo wakaderera (ULCC) yakavhurazve kaviri-vhiki kunongedzera kuBurgas, iro guta rechipiri pakukura munyika iri pamhenderekedzo yeGungwa Dema.
Kutarisana nemakwikwi, Wizz Air akatangazve kubatana kwaBudapest neZakynthos nemusi weSvondo, kujoina mamwe mavhiki akapera kumabasa kuBrussels Charleroi, Chania, Larnaca, Paris Orly, uye Porto.
"Zvinonakidza kuona kuti vhiki-mushure mevhiki isu tinokwanisa kukwidziridza nhamba dzendege sezvo zvirambidzo zvekuenda nekudzoka kuBudapest zvadzikiswa," anodaro Balázs Bogáts, Musoro weAirline Development, Budapest Airport. "Huwandu hwenzvimbo dzinodzokera kumepu yedu yemigwagwa iri kuwedzera uye maguta ese makuru muEU achakurumidza kuvhurwa sezvatinotarisira kuunzwa kweiyo EU Green ID."
Kuenderera mberi nekuvandudzwa kwayo kuBudapest, nekusimbisa kuwanda kwakawanda kuwanda pamepu yemugwagwa, pakupera kwaChikunguru Wizz Air ichabhururuka ichienda kunzvimbo makumi mashanu, ichiita masevhisi 50 evhiki nevhiki ayo achapa zvigaro zvingangosvika 148 vhiki nevhiki kubva kuguta guru reHungary.
Wizz Air, inosanganisirwa zviri pamutemo saWizz Air Hungary Ltd. uye yakanyorwa seW! ZZ Mhepo, ndeyeHungary inodhura ndege ine hofisi yayo hombe muBudapest. Ndege inosvikira maguta mazhinji kuEurope, pamwe nedzimwe nzvimbo kuNorth Africa uye Middle East.